MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardNovember 2015 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT launches the first Tourist SIM in Myanmar
[:en]Yangon, Myanmar, 30 November, 2015 – Myanma Posts and Telecommunications (MPT), the first and leading telecommunications operator in Myanmar, continues to innovate with the launch of the first Tourist SIM in Myanmar. People visiting Myanmar are now able to enjoyadedicated SIM card preloaded withapackage including both internet and credit balance.
A rising global trend on the “always-connected” traveler highlightsanew challenge for operators. As Myanmar’s national mobile operator, MPT has taken the innovation lead with the launch ofadedicated offering for the high influx of tourists during this high tourist season. Foraprice of only 10,000 Ks, the new SIM card includes the following preloaded allowances upon activation:
1.5 GB of Internet
5,000 Ks of credit balance (to be used on Tourist tariffs which are exactly the same as Swe Thahar preferred rates: national voice call and SMS together with international voice call and international SMS).
“With the start of the high tourist season, Myanmar is ready to welcome several million tourists from all over the world,” said Mr. Koichi Kawase, Chief Commercial Officer of MPT-KSGM Joint Operations. “Nowadays, the typical tourist isaheavy-data user. As the leading operator in the country, it is our responsibility to answer this need through an innovative service. With our preloaded SIM card, we offerawhole new experience to tourists. Each of them will be able to enjoy MPT’s largest network in Myanmar and the best 3G technologies throughout the country,” added Mr. Koichi Kawase.
MPT’s SIM card for tourists is valid for 10 days for both the 1.5 GB Internet and the 5,000 Ks credit balance. When the validity is over, the user may top up to continue using the SIM card. Currently, MPT’s Tourist SIMs are available at MPT Booth in Yangon International Airport. They will be shortly be available atanumber of the hotels, in main tourist destinations and tour agencies.
MPT placesahigh emphasis on customer feedback and appreciation. Through their user support service and listening, social media activities, and donation initiatives, the company is committed to improving the telecommunications landscape in Myanmar.[:my]ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက် –ရှေ့ဆောင်အစီအစဉ်သစ် တစ်ခုအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်သော ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ရည်ရွယ်သည့် သီးသန့်ဆင်းမ်ကတ်များကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော အစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) ကစတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သောကမ္ဘာလှည်ခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်ပါ ငွေကြိုတင်ဖြည့်သွင်းထားသည့် တယ်လီဖုန်းဆင်း(မ်)ကတ်များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ခေတ်စားလာသော “အမြဲချိတ်ဆက်နေရမည်”ဟူသည့် ခရီးသွားများအတွက် အဓိကအချက်သည် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများအတွက် စိန်ခေါ်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT က သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုယခုကဲ့သို့ ရှေ့ပြေးစတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဆင်းမ်ကတ်အသစ်များအတွက် ဈေးနှုန်းမှာ တစ် သောင်းကျပ်သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆင်းကတ်တွင်
အင်တာနက်ကို 1.5 GB အထိအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် စာတိုပေးပို့မှုအတွက် အသုံးပြုရန် လက်ကျန်ငွေ ၅ ထောင်ကျပ် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ (ပြည်တွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် စာတိုပေးပို့မှုတို့ကိုဆွေသဟာအစီအစဉ်မှ ဈေးနှုန်းများအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာသို့လည်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။)
“ခရီးသွားရာသီစတင်လာတာနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကနေရောက်လာမယ့် သန်းပေါင်းများစွာသောခရီးသွားတွေကို ကြိုဆိုဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ” ဟုMPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Koichi Kawase က ပြောသည်။ “ဒီနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာလှည်ခရီးသွားဧည့်သည် တော်တော်များများက အင်တာနက်ကိုအမြဲသုံးတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာအနေနဲ့ ဒီလိုရှေ့ဆောင်အစီအစဉ်သစ်တစ်ခုအနေဖြင့် ယခုလိုဝန်ဆောင်မှုတွေကို စတင်ရင်းလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။ ငွေကြိုဖြည့်ပေးထားတဲ့ ဆင်း(မ်)ကတ်တွေကို ရောင်းချပေးရင်း ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ ခံစားစေလိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့ ဧည့်သည်တိုင်းက မြန်မာပြည်ရဲ့အကြီးဆုံး ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ဖြစ်တဲ့ MPT ကွန်ရက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ ခရီးသွားလာရင်းအဆင့်မြင့် 3G နည်းပညာတွေကိုခံစားအသုံးပြုနိုင်မှာပါ”ဟု Mr. Koichi Kawase က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
MPT ၏ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ဆင်းမ်ကတ်၏ အင်တာနက်ဒေတာ 1.5 GB နှင့် ဖုန်းငွေ ၅ ထောင်ကို ၁၀ ရက်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် ဆက်လက်အသုံးပြုလိုပါကဆွေသဟာဆင်းမ်ကတ်များအသုံးပြုသကဲ့သို့ ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်ဝယ်ယူကာ ဖြည့်စွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင် MPT ၏ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ဆင်း(မ်)ကတ်များကို ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိ MPT အရောင်းကောင်တာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မကြာမီအချိန်အတွင်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည် အဝင်အထွက်များသည့် ဒေသများရှိဟိုတယ်များနှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု ကိုယ်စားလှယ်များထံတွင်ဝယ်ယူနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
MPT သည် သုံးစွဲသူများ၏ အကြံပေးမှုများနှင့် တုံ့ပြန်မှုများကိုအလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ သုံးစွဲသူများအားဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်မှုများကိုနားထောင်ခြင်း၊ လူမှုကွန်ရက်များတွင် MPT အကြောင်းအသိပေးခြင်းနှင့် အကြံပေးမှုများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းနှင့် လှူဒါန်းမှုများအားလုပ်ဆောင်ခြင်းစသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။[:]
Author MPT TelecommunicationPosted on November 30, 2015 September 23, 2016 Categories Latest News, Press Releases
Author MPT TelecommunicationPosted on November 24, 2015 December 5, 2016 Categories Latest News, Press Releases
MPT OFFERING IPSTAR USERS FREE SATELLITE UPGRADE BEFORE DECEMBER 30TH 2015
(Yangon, 23 November, 2015) MPT has replaced and updated the Thaicom5 satellite toaThaicom7 satellite free of charge, to provideabetter quality service to their C-Band IPStar users. This update, which was carried out starting from April 01, 2015, includes tuning and counterbalance of antenna, to help users receive clearer and more reliable network coverage. MPT made the announcement in Myanmar Ahlin Newspaper on March 30, 2015.
Users who did not see the previous announcement and those who changed to the new location still need to transfer to the new satellite and they should contact (01-653396, 01-653397, 01-542108, 01-552219). This announcement was also made in Myanmar Alin Newspaper on September 13, 2015.
MPT would like to remind their customers that IPStar users can have their satellite transferred to the new one free of charge, with machine part costs covered by Thaicom Co.Ltd., but they will need to arrange this before December 30th 2015. As long as the user arranges the upgrade before this date, they will only need to pay for the transportation and accommodation fees of the installer. If users contact MPT any later than December 30th, all costs should be paid by users.
Author MPT TelecommunicationPosted on November 23, 2015 December 5, 2016 Categories Latest News, Press Releases
Lucky Draw Winner List of MPTxLINE Top-up Cards
[:en]Myanmar Posts and Telecommunications (MPT) holdaspecial lucky draw with LINE throughout the month of October. When subscribers purchaseaLINE-themed MPT Top-Up card, they are automatically entered to the lucky draw pool. Prizes are over 80,000 including:
3 day/2 nights trip from Yangon to Bangkok for two people (10 prizes)
Samsung Galaxy S6 smart phone (10 prizes)
5,000 Ks City Mart gift voucher (900 prizes)
LINE notebook (10,000 prizes)
MPT free data package up to 5GB (78,000 prizes)
Now the lucky draw winners have been selected and they are as follow.
For “3 days/2 nights trip from Yangon to Bangkok for two people” prize:
Ko Toe Wai Phyoe (Yezakyo Township,Pakokku District, Magwe Division), Ko Myat Thar (Insein Township,Yangon Division), Ma Khin Sandar Myo (19th Street, Mandalay Division), Ma May Yin Oo (Maharmyaing 2nd Quarter, Mandalay Division), Ko Ga Nay Sar (Tarmwe Township,Yangon Division), Ma Yadanar Cho (Thapyaygone Market, Naypyitaw), Ko Zin Min Aung (Ann, Yakhine State), Ko Than Linn Kyaw (Tatkone , Naypyitaw), Ko Maung Gyi (Kalay, Sagaing Division), Ko Lar Lyan Htaung (Thingangyun Township,Yangon Division).
For “Samsung Galaxy S6 smart phone” prize:
Ma Aye Aye Thinn (Tawntwe Township,Yangon Division), U Zaw Zaw Min (Monywa, Sagaing Division), Ko Zin Myo Latt (Dawei,Tanintharyi Division), Ko Ye Min Thu (Hlaing Tharyar Industrial Zone, Yangon Division), Ma Theint Sandi Htet (Taungyi,Shan State), Ma Au Au Phyoe (Chan Mya Thar Si Township, Mandalay Division), U Win Naung (Kyone Pyaw Township, Ayeyarwady Division), Ko Sithu Tun (Mingalardon Township, Yangon), Ko Kaung San (Latha Township , Yangon Division), Ma Aye Khem (Thingangyun Township, Yangon Division).[:my]မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ အောက်တိုဘာလအတွင်းLINE အမှတ်တံဆိပ်ပါ MPT ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်များဖြင့် ငွေဖြည့်ပြီးMPT ၏ data packages များနှင့်ဘန်ကောက်မြို့သို့ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်များပါဝင်သည့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် LINE ရုပ်ပုံလေးများပါသော MPT၏ GSM နှင့် WCDMAငွေဖြည့်ကတ်များကိုဝယ်ယူ၍ ငွေဖြည့်ပါကကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ထဲသို့ အလိုအလျောက် အကျုံးဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆုမဲ ၈ သောင်းကျော်မှာ –
လူ ၂ ယောက်စာရန်ကုန်-ဘန်ကောက် ၂ ညအိပ် ၃ ရက်ခရီးစဉ် (ဆုမဲ ၁၀ ခု)
Samsung Galaxy S6 စမတ်ဖုန်း (ဆုမဲ ၁၀ ခု)
၅ ထောင်ကျပ်တန် City Mart gift voucher (ဆုမဲ ၉၀၀)
LINE ရုပ်ပုံပါ မှတ်စုစာအုပ် (ဆုမဲ ၁ သောင်း)
5GB ထိအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မည့် MPT free data package (ဆုမဲ ၇ သောင်း ၈ ထောင်) တို့ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ကံထူးသူစာရင်းကို ရွေးချယ်ပြီးပြီဖြစ်ရာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
လူ ၂ ယောက်စာရန်ကုန်-ဘန်ကောက် ၂ ညအိပ် ၃ ရက်ခရီးစဉ်အတွက်။ ။
ကိုတိုးဝေဖြိုး (ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ပခုက္ကူ၊ မကွေးတိုင်း)၊ ကိုမြတ်သာ (အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း)၊ မခင်စန္ဒာမျိုး (၁၉ လမ်း၊ မန္တလေးမြို့)၊ မမေယဉ်ဦး (မဟာမြိုင် ၂ ရပ်ကွက်၊ မန္တလေးမြို့)၊ ကိုဂနေဆာ (တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့)၊ မရတနာချို (သပြေကုန်းဈေး၊ နေပြည်တော်)၊ ကိုဇင်မင်းအောင် (အမ်းမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်)၊ ကိုသန်းလင်းကျော် (တပ်ကုန်း၊ နေပြည်တော်)၊ ကိုမောင်ကြီး (ကလေးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း)၊ ကိုလာလျန်ထောင် (သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း) တို့ ဖြစ်ကြသည်။
Samsung Galaxy S6 စမတ်ဖုန်းအတွက်။ ။
မအေးအေးသင်း (တွံတေးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း)၊ ဦးဇော်ဇော်မင်း (မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း)၊ ကိုဇင်မျိုးလတ် (ထားဝယ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်း)၊ ကိုရဲမင်းသူ (လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံ၊ ရန်ကုန်တိုင်း)၊ မသိမ့်စန္ဒီထက် (တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်)၊ မဥဥဖြိုး (ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း)၊ ဦးဝင်းနောင် (ကျုံပျော်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း)၊ ကိုစည်သူထွန်း (မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း)၊ ကိုကောင်းစံ (လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း)၊ မအေးခမ်း (သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း) တို့ဖြစ်ကြသည်။[:]
Author MPT TelecommunicationPosted on November 20, 2015 September 23, 2016 Categories Latest News, Press Releases
Author MPT TelecommunicationPosted on November 19, 2015 September 23, 2016 Categories CSR Activities, Latest News, Press Releases
MPT ANNOUNCES PARTICIPATION IN COMMUNICAST MYANMAR 2015: ICT Exhibition
(Yangon, Myanmar, 13 November). MPT, Myanmar’s first and leading Telecoms Company, has announced it will participate in the CommuniCast Myanmar 2015 Exhibition, taking place 17th – 19th November 2015, at the Myanmar Event Park, Yangon. The exhibition, co-located with the International Myanmar ICT Exhibition 2015 and co-organised with the Myanmar Computer Federation, is an opportunity to bring Myanmar’s leading decision makers and technology leaders together under one roof.
MPT welcomes corporate customers to visit the MPT booth at D1, where there will be presentations and business discussions about the company’s brand new offers of Data Network Services for Enterprise and Mobile Services for Enterprise from their expert team members. This is part of MPT’s commitment to “Moving Myanmar Forward,” (the company motto) by sharing the knowledge and experience gained from more than 60 years’ experience in the Myanmar telecoms market.
The first edition of CommuniCast Myanmar, which took place last year, attracted 90 companies and 2086 professional visitors, and this year even higher numbers are anticipated. The International Myanmar ICT Exhibition is fully subscribed every year in its current venue and is organised by the Myanmar Computer Federation (MCF). The combined location of events provides the opportunity for the full spectrum of the ICT economy to be in one building, from satellite and broadband through to mobile and enterprise solutions, providing visitors access toawealth of knowledge and expertise throughout the exhibition period.
[:my]ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) က ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ မှ ၁၉ အထိ ရန်ကုန် Myanmar Event Park တွင်ပြုလုပ်မည့် Communicast Myanmar 2015 အိုင်စီတီ ပြပွဲတွင် ပါဝင်ပြသမည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။
MPT မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖောက်သည်များအား D1 ရှိ MPT ပြခန်းသို့ လာရောက်လေ့လာရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အရောင်းပြခန်းတွင် MPT ၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ MPT ၏ ၀န်ဆောင်မှုအသစ်ဖြစ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးဆိုင်ရာ ဒေတာကွန်ရက် ဝန်ဆောင်မှုများ (Data Network Services for Enterprise) နှင့် မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ (Mobile Services for Enterprises)အကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များနှင့်အတူ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများပါ ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်အတွင်း နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမှ သိရှိခဲ့ရသည့်အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးခြင်းအားဖြင့် MPT ၏ “ရှေ့သို့လှမ်းချီမြန်မာပြည်” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။
Communicast Myanmar ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ပထမအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီပေါင်း ၉၀ ၊ ပညာရှင်ပေါင်း ၂၀၈၆ ကျော် လာရောက်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် ပိုမိုများပြားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည့်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော နိုင်ငံတကာမြန်မာအိုင်စီတီပြပွဲကိုလည်း ယခုကျင်းပသော Myanmar Event Park တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိပြီး စိတ်ဝင်တစားလာရောက်သူများပြားခဲ့သည်။ ထိုသို့ အိုင်စီတီပွဲများလုပ်ရာ နေရာဖြစ်သည့်အတွက် အိုင်စီတီကဏ္ဍကိုစိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် တစ်နေရာထဲတွင် ဂြိုလ်တု (Satallite) နှင့် broadband နည်းပညာမှစ၍ မိုဘိုင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးများအထိ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာသူများကိုလည်း ပြပွဲကျင်းပချိန် အတွင်း ဗဟုသုတများနှင့် လက်တွေ့ပြသမှုများကိုပါ ရရှိခံစားစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။[:]
Author MPT TelecommunicationPosted on November 13, 2015 September 23, 2016 Categories Latest News, Press Releases
MPT offers award to the Ten Millionth SweThahar subscriber
The leading telecom rewards the Ten Millionth SweThahar subscriber offeringatop-up card ofavalue of 1 million Ks
Yangon, Myanmar,2November, 2015 –Myanma Posts and Telecommunications (MPT), the first and leading telecommunications operator in Myanmar, held the ten millionth subscriber awarding ceremony this morning at 10 AM at MPT head office located at lower block Bo Aung Kyaw Road, Yangon.
“We would like to thank all our valuable subscribers. MPT is the first and longest running telecom company in the country, and now enteringanew era with more innovations, rewards, and promotions for our valuable customers. Now SweThahar plan has reached 10 million subscribers and the ten millionth lucky winner was selected among over 10 million subscribers database,” said Mr. Koichi Kawase, Chief Commercial Officer of MPT-KSGM Joint Operations.
MPT offeredatop-up card ofavalue of 1 million Ks directly to the the ten millionth SweThahar subscriber’s number. With the Top-Up award with the four-year validity, the subscriber can enjoy internet, the voice call and messaging to all MPT numbers as they are pleased. But the top-up bills are not allowed to transfer to the other user or exchange with the cash. The data usage will be charged from the reward top-up until it’s invalid.
“I’m so happy to win the 1 million Ks top-up award. As it’s valid for four years, I can enjoy calling, messaging, and internetalot. Moreover, I haveaplan to take part in the MPT SMS donation for the Rehabilitation of flood victims,” said Ma Pwint Phyu Khaing, the ten millionth subscriber. “MPT service is getting better and better now with the better network connections in the rural areas. I really like the MPT promotion programs, “5 Minutes in 1 Hour” promotion is my most like one.”
MPT placesahigh emphasis on customer feedback and appreciation. Through their customer service and listening, social media activities, and CSR initiatives, the company is committed to improving the telecommunications landscape in Myanmar and contributing to the development of both the country and its people. With the largest client base of over 16 million active users and 10 million Swe Thahar users, the company confirms its status as the leading telecommunications company in the country.
To enjoy SweThahar and its more affordable voice, SMS and higher-speed Internet services, customers on the Base Tariff plan can subscribe to SweThahar by sendingafree SMS “SWE” for prepaid users or “POSTSWE” for postpaid users to 1332. New customers to take immediate advantage of all of MPT‟s special offerings upon SIM activation.[:my]
ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှ အစဉ်အမြဲအားပေးခဲ့သောသုံးစွဲသူများအား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် ၁၀ သန်းမြောက် ဆွေသဟာရယူသုံးစွဲသူအား ကျပ် ၁၀ သိန်းဖိုး ဖုန်းငွေဖြည့် လက်ဆောင်ပေးခဲ့
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) က MPT သုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် ၁၀ သန်းမြောက် ဆွေသဟာရယူသုံးစွဲသူအား ဆုလက်ဆောင်ချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီက ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း (အောက်ဘလောက်)ရှိ MPT ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မူတွေကို အစဉ်တစိုက်ရယူသုံးစွဲကြတဲ့ မိဘပြည်သူတွေအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ၀န်ဆောင်မှုအသစ်တွေ၊ ပရိုမိုးရှင်းအစီစဉ်တွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ နှစ်သစ်တစ်ခုဆီသို့ ရှေ့ဆက်လျက်ရှိပါတယ်။ အခုလည်း ဆွေသဟာအသုံးပြုသူ ၁၀ သန်းကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ၁၀ သန်းမြောက် ဆွေသဟာ ရယူသူကို ဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု MPT-KSGM Joint Operations မှ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူMr. Koichi Kawase က ပြောသည်။
အထူးဆုလက်ဆောင်အနေဖြင့် ကျပ် ၁၀ သိန်းဖိုး top-up ငွေပမာဏကို ၁၀ သန်းမြောက် ဆွေသဟာရယူထားသည့် ဖုန်းနံပါတ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုဆုကြေးငွေကို MPT နံပါတ်အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ စာတိုပေးပို့မှုနှင့် အင်တာနက်သုံးစွဲမှုများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလမှ ငွေဖြည့်ချိန်မှစ၍ လေးနှစ်အတွင်း အကျုံးဝင်သည်။ ဆုကြေးငွေအား အခြားဖုန်းသို့လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံဖြင့်လဲလှယ်ခြင်းများပြုလုပ်၍ မရနိုင်ပါ။ ဆုကြေးငွေရရှိပြီးချိန်မှစ၍ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းတို့အတွက် ဆုကြေးငွေထဲမှ ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆုကြေးငွေကုန်ဆုံးမှသာ လက်ကျန်ငွေထဲမှ ဆက်လက်ဖြတ်တောက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
“ဖုန်းဘေလ် ၁၀ သိန်းရတယ်ဆိုတော့ အရမ်းပျော်ပါတယ်၊ ၄ နှစ်တောင်သုံးလို့ရတာဆိုတော့ ဖုန်းပြောတာတွေ မက်ဆေ့ခ်ျပို့တာတွေအပြင် အင်တာနက်လည်း သုံးမှာပါ၊ ပြီးတော့ ရေဘေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် SMS ပို့ပြီး လှူလို့ရတယ်ဆိုတော့ အကျိုးရှိအောင် ငွေတွေလှူဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်” ဟု ၁၀ သန်းမြောက်ဆွေသဟာရယူသူ ကံထူးရှင် မပွင့်ဖြူခိုင်က ပြောသည်။ “MPTက ခုနောက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုတွေက အရမ်းကောင်းလာတယ်၊ နယ်တွေမှာဆို MPT က လိုင်းမိတယ် ဒီတော့ MPT ကိုသုံးကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ်၊ အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေပေးတာတွေလည်း အရမ်းသဘောကျတယ်၊ တစ်နာရီအတွင်းမှာ ဘယ်လောက်ပြောပြော ၅ မိနစ်ပဲ ပိုက်ဆံကောက်တဲ့ အစီအစဉ်ကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်”။
MPT သည် သုံးစွဲသူများ၏ အကြံပေးမှုများနှင့် တုံ့ပြန်မှုများကိုအလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ သုံးစွဲသူများအား ဝန်ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်မှုများကိုနားထောင်ခြင်း၊ လူမှုကွန်ရက်များတွင် MPT အကြောင်းအသိပေးခြင်းနှင့် အကြံပေးမှုများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းနှင့် လှူဒါန်းမှုများအားလုပ်ဆောင်ခြင်းစသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိသည်။ MPT ၏ Mobile ဖုန်းအသုံးပြုသူစုစုပေါင်း ၁၆သန်းကျော်တွင် ဆွေသဟာအသုံးပြုသူ ၁၀ သန်းကျော်၊ ပုံမှန်အသုံးပြုသူ ၆ သန်းကျော်ဖြင့် အကြီးမားဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူဈေးကွက်ကို ရရှိထားသည့် MPT သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာနေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားလျက်ရှိသည်။
လက်ရှိတွင် အခြေခံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို အသုံးပြုနေသူများအနေဖြင့် ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကို ရယူအသုံးပြုလိုပါက Prepaid ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူအတွက်“SWE”သို့မဟုတ် Postpaid ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူအတွက် “POSTSWE” ဟုရိုက်နှိပ်ပြီး 1332 သို့ SMS အခမဲ့ပေးပို့ ခြင်းအားဖြင့် ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကို အလွယ်တကူရယူနိုင်ပါသည်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) ၏ ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်များကိုအသစ်စတင် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကိုသီးသန့်လျှောက်ထားရန်မလိုတော့ဘဲ အလိုအလျောက် ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။[:]
Author MPT TelecommunicationPosted on November 4, 2015 September 23, 2016 Categories Press Releases